Uphi Ukunyaniseka Kwakho? | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 31, 2011 NgoLwesibini, Novemba 1, 2011 Douglas Karr
Ukunyaniseka kuchazwa njenge umgangatho wokunyaniseka emntwini okanye kwinto ethile. Ngaba ukhe waqaphela njani ukunyaniseka kuxoxwa, nangona kunjalo? Sithetha ngendlela abathengi banyanisekile, njani abasebenzi banyanisekile, njani abathengi banyanisekile, njani Abavoti banyanisekile…
Abaqeshi bathetha malunga Ukunyaniseka komqeshwa, kodwa emva koko baqesha abantu bangaphandle, bangazivelisi ngokwabo iitalente zabo zangaphakathi, okanye okubi kakhulu - bayayishiya italente ethembekileyo. Kutheni ukunyaniseka kwabo kumgca osezantsi kuphela okanye kwizabelo?
Abezopolitiko balindele Ukunyaniseka komvoti, kodwa emva koko sinyula iinkokheli ezivota ngokwamaqela kwaye zilibale ukuba ngubani omele ukumela. Kutheni ukunyaniseka kwabo kwiqela labo likhulu emva kokonyulwa kwabo?
Iinkampani zithetha malunga ukunyaniseka kwabathengi, Kodwa banikezela abathengi abatsha abasandula ukujongwa ngakumbi kunye nesivumelwano esingcono kunesikhoyo. Iphi i zabo ukunyaniseka kubathengi abakhoyo? Ndiyayithanda ividiyo evela Ibhanki emanyeneyo ethatha ukujonga okuhlekisayo ekufumaneni abathengi
Ke kutheni le nto sisoloko silinganisa ukunyaniseka ukusuka ezantsi ukuya phezulu?
Kubonakala ngathi nanini na umntu kubunkokeli axoxa ngokunyaniseka, abathethi ngako ukunyaniseka kwabo, Bathetha ngendlela abathengi okanye abasebenzi abathembeke ngayo kubo. Kutheni isebenza ngoluhlobo? Andiqondi ukuba kufanelekile.
Ukunyaniseka kubalulekile kum. Xa umntu endijonge emehlweni kwaye endixhawula, ndiyakuxabisa oko ngaphezu kwalo naluphi na uxwebhu olusemthethweni okanye utyikityo. Xa umntu ebheyila kuyo, njengomthengisi okanye iqabane, ndiye ndingcungcuthekise. Ukuba bakulungele ukuncama ukunyaniseka kwabo, akukho nto bangayi kuyenzela imali. Ndiza kuphuma kwindlela yam ukuba ndingaze ndiphinde ndenze ishishini nenkampani enjalo.
Yokuphela abathengi Ndilindele ukunyaniseka kwezi sizityalile imali. Amashishini ahlala esenza isaphulelo semali okanye axhumele iihupu zeenkampani afuna ukwenza ushishino nazo - asihlukanga. Asikuphunguli ukufunyanwa, kodwa sihlala sinikela ngesisa kwiinkampani ezingenazo ezinye iindlela. Nje ukuba beme ngeenyawo, nangona kunjalo, ithemba lam kukuba baya kuba nombulelo kutyalo-mali esilwenzileyo kwaye baya kuhlala nathi. Inyaniso kukuba, asiyiboni rhoqo. Kubonakala ngathi ukunyaniseka kufile.
Ukuba umthengi usihlawula kakuhle ukuze afumane iziphumo-kwaye asizenzi-andizukulindela nakuphi na ukunyaniseka Ukusuka kuloo mthengi kuba khange sibambelele esiphelweni sesivumelwano.
Ukunyaniseka konke, ndicinga ukuba iintlanganiso zopolitiko kule minyaka imbalwa idlulileyo zimalunga nokunyaniseka. Ndicinga ukuba uninzi lwabantu ngovuyo lutshona imali eninzi epokothweni yomntu osisityebi… kodwa silindele ukuba bayakuthembeka kuthi njengabathengi. USteve Jobs wayengumzekelo oqinileyo woku. Saxolelana kwimida yenzuzo kunye nemveliso engaselunxwemeni kuba thina, abathengi, sasinyanyekelwa kakuhle.
Ngaba ubonelela ngokunyaniseka okufanayo kumaqabane akho nakubathengi njengoko ulindele kubathengisi bakho nakubasebenzi?